Gabadha ku jecel waaa gabar ka duwan gabdhaha kale - Cishqi
Sidee ku ogaan ku ogaan kartaa gabadha ku jecel, Waa maxay calaamadaha lagu garto gabadha ku jecel? Jawaabta weey fududahay: Raac 12 kaan calaamadood.
Sida aan ogsoonnahay gabadha ku jecel ama ku rabto weey kaaga duwan tahay gabdhaha kale. Sabab? Sababtoo ah waxay leedahay calaamado ka duwan gabdhaha kale. Astaamaha ugu muhiimsan ee ay leedahay gabadha ku jecel waxaad ku baran doontaa qormadaan.
Gabadha ku jecel waxaa laga yaabaa inaad ku aragtay 12 kaan calaamadood balse aadan hubin in dareenkaasi uu yahay mid dhab.
Mararka qaar wiilasha waxaa soo maraa fursado fara badan balse kama faaiideystaan. Waxaa laga yaabaa gabadha ku jecel in ay tahay gabar aad u xishood badan oo aanan awoodin karin iney toos kuugu sheegato jaceylkeeda.
Si kastaba ha u xishood badnaato, gabadha ku rabto ama ku jecel ma qarin karto dareenkeeda: waxay isku dayeysaa iney ku dareensiiso si kastaa oo ay u xishood badan tahay.
Markaad aragto gabar ku doondooneyso, hareerahaaga marmareyso misana dib kuu soo fiirineyso, waxaa laga yaabaa inuu dareen ku galo oo ah “miyeey ku jeceshahay gabadha” mise waa uun iska kaa daawaneysaa?
Hadaba maanta si aad dareenkaasi u xaqiijiso waxaan kuu tilmaameynaa astaamaha ugu muhiimsan ee aad ku ogaan kartid gabadha ku jecel.
Gabadha ku jecel – Waxay leedahay 12 kaan calaamadood
Waxaan kor ku soo xusnay calaamadaha lagu garto gabadha ku jecel ma ahan mid ay qarin karto xittaa haddii ay xishood badan tahay.
Dabcan sida dhacdo fursadahani waxay soo martaa wiilal fara badan laakin maxay kuugu taalaa kama faaideystaan.
Gabadha ku jecel inaad dareenkeeda iyo fursada ay ku siisay inaad ka faaideysato waxay u baahan tahay geesinimo. Markaad isku kalsoon tahay kama baqaneysid gabar kastaa iskaba daa gabadha ku jecel.
Hadeeey ugu badato waxay ku leedahay iga raali noqo, maxay kuu dhintay? Jawaabta waxba. Hadaba waa maxay calaamadaha gabadha ku jecel?
1. Gabadha ku jecel waa mid xishood badan
Waa calaamada ugu horaysa waxa ay la soo baxaysaa xishood xad-dhafa ah oo mararka qaarkood ku kalifa iney ku tusi kari waydo wajigaaga oo ay fooror kugu qaabisho.
2. Gabadha ku jecel waa mid naxdin badan
Waxa gabadha ku badanaya naxdinta dhinaca wadnaha la xidhiidha oo markasta oo ay la kulanto qofka ay jeclayd, waxa garaac xoogan sameeya wadnaha gabadha tani maaha xanuun, laakin waa jacayl karaaray. isku dhexyaacid iyo aamusnaan ayaa wehelisa.
3. Weey Hadaaq badan tahay
Waxa gabadha ku jecel ku bata iney markasta ku halmaanto magaca qofka ay jeceshahay iyada oo qof kale u yeedhaysa ayeey ku hadaaqaysaa magaca qofka ay xooga u jeceshahay, isla mudo yar kadib weey ka noqonaysaa iyada oo iska dhigaysa in ay khaldantay, balse uu jiitay wixii qalbigeeda ku jiray.
Qish: Baro erayada ay gabdhaha jecelyihiin
4. Gabadha ku jecel weey kaa sheekayneysaa
Waxaad arkaysaa iyada oo mararka qaarkood kaa sheekaynaysa waa markeey la joogto saaxiibadeeda dhabta ah ee aanay waxba kala qarsan, ugana sheekaynayso in ay si wayn u jeceshahay, balse waxay ka faaloonaysaa dhaqamada fiican ee uu leeyahay qofka ay jeceshahay.
Wixii su,aalo ah oo aad jeceshahay inaan kaa caawino waxaad inoogu soo diri kartaa halkaan: Cishqi Contact
5. Waa mid shaki badan
Shakiga fara badan waa calaamad lagu garto gabadha ku jecel. Waxa ay la soo baxaysaa shaki oo ay ka qabto in laga qaado jacaylkeeda, xitaa haddii ay aamisantahay in uu daacad u yahay, markasta oo ay arki weydo waxa ay u qaadataa in uu ku maqan yahay gabadh kale, taasi oo sabab u ah shaki aan la soo koobi karin.
6. Eegmo badan
Calaamadani waa mid kamid ah calaamadaha lagu garto gabadha ku jecel ama kaa heshay. Sida aan ognahay dareenka ugu badan ee gabdhaha ay u qaadaan wiilasha waxa uu ka bilaawdaa eegmo badan.
Calashaan gabadha markeey aragto wiil qurux badan, labiskiisu kaalay iska arag uu yahay. Waxay bilaabeysaa iney ku soo eegto waxa ay markasta jeceshahay iney ku daawato, kamana dhargeyso aragtidaada sababtoo ah nafteeda ayaa kuu bogtay oo adiga kuu ooman.
Dhinaca kale ma doonayso in uu arko qofkan ay eegmada ku badinayso, marka uu soo eegana deg deg ayey uga jeesanaysaa laakiin waxa ay rabtaa in ay eegto isaga oo aan soo eegayn. noocan eegmada ahi waa ay ka duwan tahay eegmooyinka waayo waa indho-ku doogsi iyo farxad.
7. Maqnaashiyaha xaga maskaxda ah
Waa calaamad aan sidaasi u waynayn balse mararka qaar noqota mid keenta saamayn xoogan. Waxa gabadha ku jecel ku dhaca maqnaansho dhinaca maskaxda ah, oo marka ay hawl qabanayso soo dhexgala.
Waxa lagu arkaa gabadha marka ay dad la joogto iyadoo maskax ahaan baxda oo ka fikiraysa qofkii soo galay maskaxdeeda, haddii uu qof su aalo wixii ay ka fikiraysay, waabay dafirtaa iney fikiraysay.
Waxyaabaha maankeeda ka guuxayana waxa ugu culus sida ay u la kulmi lahayd qofka ay u hayso jacaylkaan daran. Alla dareenku macaan badanaa markaad qof si dhab ah u jeclaato.
8. Socod ku-badin
Waxa ay goor kasta raadisaa iney indhaha ku dhufato qofka u daran, taasina waxa ay keentaa in ay bilawdo socod badan oo ay ku tagayso goobaha lagaa helo qofka ay rabto in ay indhaha ku doogsato ugu yaraan sadex jeer ayeey socod ku maraysaa goobaha laga helo jacaylkeeda ay ku indho kuulato.
Waa ihelay cishqi, haba igu badnaatee, waan hubaa kalgacalow wuu ihayaa dhibkiisee. Sida haadla leylkii, heehaabo mooyee, howl yari ma seexdoo, habeenkii bar tagay baa la ikaa horkeenaa. Waa howl aduunyee, ma ii hiilineysaa, qofba waa halkiisee ma ii hagar baxeysaa? Waa halis nafteyduye, hadma hadma goormaan ku helayaaa?
Qishka 2- aad: Xaqiijinta Gabadha Ku Rabto
Kadib xaqiijintqa Gabadha ku rabto waxa ay ubaahantahay inaad la hadasho. Hadaba halkani waxaaan kuugu diyaarinay erayo aan isdhaheyno alley lahee waa muhiim inaad taqaano ka hor shukaansiga gabdhaha.
Hadaba halkaan ka Baro Erayo jaeyl ah oo soo jiidasho leh a-z
9. Gabadha wax jecel waa caano madiido
Wax kasta haye; markasta oo uu wax waydiiyo qofka ay jeceshahay waxa ay ugu jawaabtaa haye xittaa haddii aanay waxaasi awoodi karin.
Arintani waa culayska uu leeyahay jaceylku marna ma dhihi karto waxaasi ma awoodi karo ama weey igu adag tahay. Sababtoo ah waxaa qalbigeeda sabeeynayo dareenka macaan ee ay u qabto qofka ay jeceshahay.
10. Hadalkiisu ma dhibo
Qofka ay jeceshahay wax kasta oo uu ku yiraahdo uma keeno wax dhibaato ah hadeey noqoto caay, af xumo, hanjabaad iyo iwm. kama xanaaqayso waayo waxaa jiidanaya cishqi aan la sookoobi karaynin. Waxa ay ku dadaalaysaa in ay yeesho wax kasta oo raali galinaya qofkaan ay aadka u jeceshahay.
Ku xirnow Cishqi – Isha Arimaha Jaceylka. Like gareey boggeena si aad uga hesho qormooyin xiiso leh kuwii ugu dambeeyay: Cishqi.
11. Xarrago Xarrago dhaaftay
Waa mid Xarrago badan oo showiste ah
Gabdhuhu waxay isku dhaafeen xarrago, markeey gabdhaha kale xiranayaa dirac collection ah sida somali dirac uk, iyadu waxay xiraneysaa somali dirac France.
Taasi waxaan ula jeedaa iney xirato labiska ay u aragto iney indhahaagu qabanayaan. Waxay goor kasta is ka dhistaa dhinaca labiska iyo kala badalka dharka.
Tani waa calaamad muujinaysa soo jiidasho qofka ay jeceshahay, waxa ay ka baqaysaa in lagu naco labis xumada iyo xarrago la,aanta. Ugu yaraan ilaa sadex set oo kala duwan ayey xidhataa marka ay doonayso in ay soo hormarto goobaha laga helo qofka ay jeceshahay.
12. Teleefoon ku-hadal badan
Waxay aad ugu dadaalaysaa in ay xiriir fiican la yeelato qofka ay jeceshahay haddii ay ku adkaato in ay toos ula xiriirto jacaylkeeda, waxa ay la xiriiraysaa cida ay isku fiican yihiin jacaylkeeda, iyada oo ka urinaysa jacaylkeedii.
Markasta waxa lagu arkaa iyadoo teleefoon garaacaysa ama ku mashquulsan in ay cid lahadasho amaba fariimo diraysa sida erayo jaceyl ah oo soo jiidasho leh kuwaasoo ay u aragto iney ku hanan karto jaceylkeeda.
Ninka xaaskiisa jecel waa nin nuucaan ah
U dir jaceylkaaga dhambaal jaceyl oo xiiso leh
Sidaan makugu sameeyay qof aad jeceshahay?
Guntii iyo Gunaadkii
Gabadha ku jecel ma ahan iney calamadahaan oo dhan yeelato, waxay sidoo kale yeelan kartaa astaamo u eg sidaan.
Warbixintani waxaa ka siman 90% gabdhaha / Boqolkiiba 90. Hadaba waxaan kuu rajeyneynaa guul iyo nolol jaceyl ku dhisan. Haddii aad qabto su,aalo kale waxaad inoo reebi kartaa comment ama waxaad noo soo diri kartaa fariin gaar ah.